Akụkọ - Onye inyeaka n'èzí - Akpa
Onye inyeaka n'èzí - Akpa
N'èzí omume bụ otu egwuregwu ihe na njem nke ahụmahụ njem ẹkenịmde ke eke gburugburu ebe obibi, gụnyere ịchụ nta, agbapụ, ịkụ azụ, ịgba ụta, sniping, ụzọ, ugwu ugwu, hiking wdg na-akpali oru ngo, ọtụtụ n'ime n'èzí ihe na-agbanwe agbanwe na expeditionary na. ọtụtụ ịnụ ọkụ n'obi na obi ụtọ, nke na-anabata ọdịdị na ihe ịma aka.N'oge njem ahụ, onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ onwe ya ma nweta nri sitere na okike.Ya mere, nke a bụ otú ị ga-esi nweta ezigbo akpa azụ na gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe aghọwo ihe iseokwu.Mpụta nke akpa azụ na-eme ka nsogbu a bụrụ ngwọta zuru oke.
* Akpa ịchụ nta
Ihe omume ịchụ nta na-emekarị n'ime ọhịa, okporo ụzọ adịghị mma, njem adịghị adaba, yabụ ezigbo akpa ịchụ nta maka ndị dinta niile dị mkpa.
Site ákwà ewu / njupụta / arọ / PVC ntekwasa / TPU laminated etc.details anyị ga-ahụ dị iche iche àgwà, na-emekarị ịchụ nta azu paaki ukwuu n'ime na anit ịkpụ, ọkọ na-eguzogide ọgwụ, waterproof (na-emekarị 3 etoju, maka 3000mm / 1000gr / m2, 5000mm / 3000gr / m2 na 8000mm / 5000gr / m2), nwere ikike dị ukwuu na imewe amamihe iji gbasaa oghere njuputa, nke a na-eji maka ọnọdụ ọjọọ dị iche iche na ọnọdụ pụrụ iche.
* stool/akpa azụ nwere ike ịgbakọ
Ịkụ azụ bụ ihe omume dị n'èzí mara mma, ebe anụ ụlọ/akpa azụ a na-atụgharị bụ akpa kacha ewu ewu.Mgbe emepere emepe, ị ga-ahụ na ọ bụ stool, ị nwere ike ịnọdụ ala ka ọ na-azụ azụ, na akpa azụ nwere ike ịnwe nri azụ, nko ịkụ azụ, akwụkwọ ndetu, mkpịsị akwụkwọ, mkpuchi, uwe wdg. ngwá ọrụ ịkụ azụ na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, ọ bụ ọtụtụ ọrụ ịkụ azụ. oche nke nwere ike iburu 100KGS kacha.
Tube àgwà ukwuu n'ime ígwè 14-25mm na aluminum 19-25mm, tube tickness1.2mm.
* Akpara akpa
Nhazi akpa azu dum na-adị fechaa na kọmpat.Eriri ubu akwụsịla sistemu akpa azụ iku ume nke nwere ike ibelata nrụgide nke ubu na azụ.N'ime eriri ubu kacha bụ akwa ntupu nke nwere ike ịbawanye ikuku.Ọtụtụ mgbe n'akụkụ, enwere akpa abụọ nwere ike ịnwe akpa mmiri, akwụkwọ ndetu ma ọ bụ ihe ọzọ dabara adaba.Akụkụ ihu, na-enwekarị ọtụtụ bartacks nwere ike kwụgide ngwa ngwa nke ọma.N'okpuru ebe a, e nwere eyelets, nke mere na ọ nwere ike na-eku ume maka akpa ngwaahịa, na-na n'úkwù belt na-adị mma karị.
N'okpuru bụ ụdị emepụtara anyị, nnabata kọntaktị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.